ग्यालक्सी फोल्ड सेप्टेम्बरमा सुरू भयो र यी परिवर्तनहरू हुन् ग्याजेट समाचार
ग्यालक्सी फोल्ड सेप्टेम्बरमा सुरू हुनेछ, यो सबै परिवर्तन भयो
ईडर एस्टेबान | | मोबाईलहरू
ग्यालक्सी फोल्ड आधिकारिक रूपमा फेब्रुअरी मा प्रस्तुत गरिएको थियो यसै वर्षको। यसरी सामसु। बजारमा पहिलो फर्म बन्यो फ्लिप फोनको साथ हामीलाई छोड्दै। कम्पनीले यस बजार क्षेत्र मा एक सन्दर्भ बन्न आफ्नो इरादा स्पष्ट गर्नुभयो, त्यसैले यो प्रक्षेपण महत्त्वपूर्ण कुरा थियो।
उपकरणको सुरुवात अप्रिल महिनाको लागि थियो, अप्रिलको अन्त्य केही बजारमा र अन्यमा मेमा। त्यसोभए यो स्टोरहरूमा सुरूवात हुने किसिमको पहिलो फोन हुनेछ। तर यसको रिलीजको केहि हप्ता अघि, यस ग्यालक्सी फोल्डको लागि चीजहरू स्पष्ट रूपमा गडबड भयो.
1 ग्यालक्सी फोल्ड सुरुवात रद्द भयो
2 सेप्टेम्बरमा सुरूवात गर्नुहोस्
3 ग्यालक्सी फोल्डमा के परिवर्तन गरिएको छ?
ग्यालक्सी फोल्ड सुरुवात रद्द भयो
सामसु decidedले निर्णय गर्‍यो ग्यालेक्सी फोल्डको युनिटहरू धेरै पत्रकारलाई पठाउनुहोस् र प्रभाव दुनिया भर। विचार यो हो कि तिनीहरूले फोन परीक्षण गर्न सक्दछन् र त्यसपछि यस बारे लेख्न सक्दछन्। यो यी परीक्षणहरूमा हो कि चीजहरू गलत हुन थाल्छन्, उपकरण स्क्रिनको साथ समस्याहरू पत्ता लाग्यो। विशेष रूपमा, फोनको स्क्रीन सेभर। केही व्यक्तिले यसलाई हटाए किनकि यसले पर्दा पूर्ण रूपमा कभर गर्दैन र उनीहरू सोच्दछन् कि यो हटाउन सकिन्छ।
यो बग थियो, कारण स्क्रीन संग समस्या हुन शुरू हुनेछ। साथै, केहि विशेष केसहरूमा ग्यालेक्सी फोल्डको स्क्रिनले प्रतिक्रिया गरिरहेको थिएन वा बिच्छेद पनि भएको थियो। त्यहाँ बिस्तारको क्षेत्रका बारे शंका पनि थियो, किनकि यो निकै टाढा थियो र धुलो सजिलै भित्र जान अनुमति दियो। फोनमा यी विफलताहरूको बारेमा समाचारले सामसु itsलाई यसको सुरुवात रद्द गर्न निर्णय गर्‍यो र केही समयको लागि ढिलाइ गर्‍यो।
यस घोषणापछि, सामसुले फोनमा परिवर्तनको श्रृंखलामा काम गर्न सुरु गर्यो। फर्मले दुई पटक फोन स्वीकार गर्न को लागी फोन गर्न तयार छैन भनेर स्वीकार गरेको छ, कि तिनीहरूले गल्ती गरे। यसमा के परिवर्तनहरू भए भनेर जान्न यो सम्भव थियो, यद्यपि फर्मले धेरै केसमा यसलाई आरम्भ गर्‍यो कि यसको प्रक्षेपणको लागि कुनै मिति थिएन। यस हप्ता सम्म, जब तिनीहरूले यो सेप्टेम्बरमा बजारमा पुग्ने पुष्टि गरे.
Huawei Mate X, नयाँ फोल्डिंग फोन जुन ग्यालेक्सी फोल्डरमा खडा छ
सेप्टेम्बरमा सुरूवात गर्नुहोस्
यस हप्ता सामसुले त्यो घोषणा गर्‍यो ग्यालक्सी फोल्ड सेप्टेम्बरमा आइपुग्न सुरू हुनेछ। यस महिना कुनै खास मिति दिइएको छैन, न त यो थाहा छ कि यो एक विश्वव्यापी प्रक्षेपण हुनेछ वा यदि यसले अन्य देशहरूमा विस्तार गर्नु अघि केही बजारमा पहिले प्रक्षेपण गर्ने छ। यस्तो देखिन्छ कि यस विकल्पको बारेमा दोस्रो विकल्प भनेको सब भन्दा प्रशंसनीय छ।
कम्पनी पहिले नै आवश्यक परिवर्तन गरिसक्यो फोनमा। तिनीहरुलाई धन्यबाद, अब यो स्टोरहरुमा सुरूवात गर्न तयार छ, यसलाई धेरै प्रत्याशित प्रक्षेपणहरू मध्ये एक बनाएर। मार्चमा विभिन्न वेबसाइटहरूमा आरक्षण अवधि थियो, जस्तै सामसु'sको आफ्नै। फोन रद्द भएपछि, यो पैसा सुरक्षित सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई फिर्ता गरियो।
प्रश्न यो छ कि उपभोक्ता अझै छ कि छैन ग्यालक्सी फोल्ड खरीद गर्न मा रुचि। फर्मले हामीलाई परिवर्तनहरू सहित छोडिदियो, जुन हामी तपाईंलाई तल बताउँछौं। यद्यपि उनको समस्या यी महिनाहरूमा यी महिनाहरूमा केही प्रभाव पारेको छ। धेरैलाई यो फोनको शुभारंभको बारेमा शंका छ।
हामी सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड र हुवावे मेट एक्स तुलना गर्दछौं
ग्यालक्सी फोल्डमा के परिवर्तन गरिएको छ?
यी महिनाहरु लाई यति सेवा गरेका छन सामसुले फोनमा परिवर्तन गरेको छ। ती मध्ये पहिलो, सम्भवत सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण, स्क्रिनसेभरलाई जनाउँछ। यो उपकरणको एक ठूलो समस्या थियो, जुन यस अवस्थामा निम्नानुसार समाधान गरिएको छ। यस संरक्षकको किनारहरू ग्यालेक्सी फोल्डको मुनि लुकाइएको छ। यस तरीकाबाट, यो अधिक जटिल छ वा प्रयोगकर्ताहरूलाई यसलाई हटाउन लगभग असम्भव छ।
यस अवस्थामा जोखिमबाट बच्न सामसु Samsung स्पष्ट र अधिक देखिने चेतावनीको पनि परिचय गर्दछ। यसैले यसको बक्समा र यसका निर्देशनहरूमा यो स्पष्ट रूपमा देखिने छ, जसले फोनबाट यस सुरक्षात्मक प्लास्टिक हटाउन बढी व्यक्तिहरूलाई रोक्दछ। त्यसोभए यस समस्याको साथ पहिलो पटक यस यन्त्रसँग आयो।
फोनमा अन्य ठूलो परिवर्तन गरिएको छ बिस्तारको माथिल्लो र तल्लो बिचको अन्तर खाली गर्नुहोस्। पहिलो परीक्षणहरूमा यो देख्न सक्दछ कि यसले धेरै गन्दै फोनमा सजिलैसँग डोर्‍यायो, जुन पर्दाको तल रहेको थियो, सम्भावित जोखिमको समस्याको साथ। यसैले फोनले यसैले कम धूल स collect्कलन गर्नुपर्दछ। सम्भव समस्याहरूलाई वेवास्ता गर्नुको साथसाथै यो फोल्ड हुँदाको धुलो जम्मा भएको कारण।
कम्पनीले थप पुष्टि गर्यो कि उनीहरूसँग छ नयाँ सुरक्षात्मक क्याप्सको साथ प्रबलित कब्जा र धातुको तहहरू यस ग्यालक्सी फोल्डरको स्क्रिन मुनि थपिएको छ। यो स्क्रिनको कठोरता बढाउनको लागि हो, जुन यसमा तह लगाउँदा समस्या हुनबाट रोक्छ। अर्कोतर्फ, यो भनिन्छ कि सुधारिएको छ राम्रो अनुप्रयोग को अनुभव को लागी अनुप्रयोगहरु मा।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » ग्यालक्सी फोल्ड सेप्टेम्बरमा सुरू हुनेछ, यो सबै परिवर्तन भयो